Hair Loss in Women Treatments အမျိုးသမီး ဆံပင်ကျွတ်တာ ဘာနဲ့ကုမလဲ
ပို့စ်တင်ချိန် - 9/16/2013 08:45:00 AM
အမျိုးသမီး ဆံပင်ကျွတ်တာကို ယောက်ျား-ဟော်မုန်းဆေးနဲ့ ကုရတယ်လို့ပြောရင် ကသိကအောင့်တော့နိုင်ပါမယ်။ ရောဂါနာမည်ကိုက Androgenetic alopecia (အင်ဒရိုဂျင်းနစ်) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းလို့ ခေါ်တာဟာ ယောက်ျား-ဟော်မုန်းနာမည် ဖြစ်နေတာ သတိပြုပါ။
ဆရာဝန်တွေကလဲ ဟော်မုန်း-သောက်ဆေးပေးဘို့ ဝန်လေးပါတယ်။ ဆေးမသုံးခင် Androgen ယောက်ျား-ဟော်မုန်း များနေလို့ ဆံပင်ကျွတ်တာသေခြာစေရတယ်။ ဒါတောင်မှ လိမ်းဆေးပေးကြတာ များတယ်။ စောစောသိသူကို စောစော ဆေးလိမ်းခိုင်းတာ ပိုကောင်းတယ်။ ကြာနေတာမျိုးက Hair follicles ဆံပင်ဖြစ်တဲ့ အိတ်လေးတွေ အတော်များများကို ဖျက်ဆီးပြီးသားဖြစ်နေနိုင်တယ်။ တခြားလိုအပ်မဲ့ Vitamin (ဗီတာမင်) နဲ့ Mineral ဓါတ်ဆားတွေပါ သောက်ဘို့ လိုသေးတယ်။ ဆေးရဲ့ ထိရောက်မှုက တယောက်နဲ့တယောက် မတူတတ်ပါ။
1. Minoxidil (Rogaine) ဆေးဟာ အရင်က သွေးတိုးအတွက်ပေးတဲ့ စားဆေးဖြစ်တယ်။ ဆေးသောက် နေသူတွေမှာ ဆံပင်တွေ ထူထဲလာရာကနေ သိလာတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးပါဘဲ။ သုတေသနလုပ်တော့ လိမ်းဆေးပေါ်လာတယ်။ လိမ်းဆေးက သွေးထဲဝင်ပေမဲ့ မများပါ။ ဆေးက မျက်နှာလိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုသိသိသာသာ ကောင်းတာတွေ့ရတယ်။ Minoxidil 2% ကိုသာ FDA က အသိအမှတ်ပြုထားတယ်။ 5% ရောင်းတာရှိပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မသုံးသင့်ပါ။ ဆရာဝန်ကနေညွှန်ရင်လဲ သူ့စောင့်ရှောက်မှုအောက်ကနေ လုပ်စေပါတယ်။ 5% ထိရောက်မှု ပိုတာတော့ တွေ့ရတယ်။ ၈ လ ဆေးလိမ်းတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၄၅ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးတွေကို လေ့လာတော့ ၁၉% မှာ အသင့်အတင့် ကောင်းတယ်။ ၄ဝ% မှာ အနည်းအကျဉ်း ကောင်းတယ်။ ဆေးမပေးအုပ်စုမှာ ၇% နဲ့ ၃၃% လို့ နှိုင်းယှဉ်နိုင်တယ်။
2. Spironolactone (Aldactone) ဆေးကတော့ Androgen Receptor Inhibitors ဖြစ်တယ်။ Potassium-sparing Diuretics လို့လဲခေါ်တယ်။ ဆိုလိုတာက ဆီးသွားစေတဲ့ဆေး၊ ဒါပေမဲ့ တခြား ဆီးဆေးတွေလို (ပိုတက်စီယမ်) မနည်းစေဘူး။ Edema ကိုယ်ရောင်တာ နဲ့ Hypertension သွေးတိုးအတွက်ပေးတယ်။ Hyperaldosteronism ရောဂါမှာလဲ သုံးပါသေးတယ်။
3. Cimetidine (Tagamet) ဆေးကတော့ Histamine blockers အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ အစာအိမ်လေနာအတွက် သုံးတယ်။ Cimetidine ဆေးကို Hirsutism ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မျက်နှာမှာ အမွှေးများနေတာအတွက် သုံးတယ်။ (အင်ဒရိုဂျင်းနစ်) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအတွက်လဲ ကောင်းတယ်။ ဆေးအဆ များမှသိသာတယ်။ ဆေးက မိန်းမ ပိုဆန်စေတယ်။
4. Cyproterone Acetate ဆေးက Excessive sex drive in men ယောက်ျားတွေမှာ လိင်စိတ် ရိုင်းစိုင်းကဲလွန်း နေတာအတွက် သုံးတယ်။ ဒီဆေးကို Hirsutism ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ မျက်နှာမှာ အမွှေးများနေတာ အတွက်လဲ သုံးတယ်။
5. Estrogen (အီစထိုဂျင်) နဲ့ Progesterone (ပရိုဂျက်စတီရုံး) ဟော်မုန်းတွေပါတဲ့ Oral Contraceptives ကိုယ်ဝန်တား စားဆေးတွေကနေ မျိုးဥအိမ်ကနေထုတ်တဲ့ Ovarian androgens ဟော်မုန်းတွေကို နည်းစေတယ်။ ဒါကြောင့် Androgenetic alopecia (အင်ဒရိုဂျင်) များလို့ဖြစ်ရတဲ့ ဆံပင်နည်းတာ-ပါးတာအတွက် သုံးနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဘို့ရာသုံးတဲ့အခါ သတိထားစရာတွေ မသုံးသင့်တာတွေအတိုင်း သတိရှိရမယ်။
6. Ketoconazole (Nizoral) လိမ်းဆေးဟာ မှို (ဖန်းဂတ်စ်) ရောဂါအတွက်သုံးနေတာဖြစ်တယ်။ ဒီဆေးက Adrenal gland (အဒရီနယ်လ်-ဂလင်း) နဲ့ ကျား-အစိ၊ မ-မျိုးဥအိမ်တွေကနေ Testosterone (တက်စတိုစတီရုံး) ဟော်မုန်း နဲ့ တခြား Androgens (အင်ဒရိုဂျင်) တွေ ထွက်မှာကို နည်းစေတယ်။ Nizoral shampoo ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲမှာ Ketoconazole 2% ပါတယ်။
7. Finasteride (Propecia, Proscar) ဆေးက Dihydrotestosterone (DHT) ခေါ်တဲ့ ဆံပင်-အိတ်လေးတွေကို ဒုက္ခပေးမဲ့ (အင်ဇိုင်းမ်) ကို တားဆီးပေးတယ်။ ဆေးပေါ်ကာစတုံးက Prostate gland ဆီးကျိတ်ရောဂါအတွက် ဖြစ်တယ်။ Propecia 1 mg ကို ယောက်ျားတွေ ဆံပင်ပေါက်စေဘို့ သုံးနိုင်တယ်။ တချို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မဟုတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်လဲ သုံးနိုင်တယ်။ ယောက်ျားတွေသုံးရင် လိင်အင်္ဂါသန်မာမှုနဲ့ လိင်စိတ်တွေမှာ သတိထားရမယ်။ မိန်းမတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တာတော့ မတွေ့ရဘူး။
8. Cyproterone Acetate + Ethinyloestradiol (Diane 35, Diane 50) ဆေးကလဲ ကိုယ်ဝန်တား စားဆေးဘဲ။ Diane 35 = 0.035 mg Estradiol 0.035 mg + Cyproterone2mg ပါတယ်။ Diane 50 = Estradiol 0.050 mg + Cyproterone2mg ပါတယ်။ ရင်သားနာတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ လိင်စိတ်နည်းတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တ...
ကော့သောင်း ထောင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ၁ ဦး သေဆုံး
အီသီယိုးပီးယား နိုင်ငံတွင် အသက် ၁၆ဝ နှစ်အရွယ်ရှိဟု...
ရန်ကုန်-ကျိုက်ထို အဲကွန်းအမြန်ရထားလက်မှတ် နိုင်ငြံ...
အရက်ကို ခွန်အားဖြည့်အချိုရည်နှင့် ရောစပ်ပြီး သောက်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ချက် သမ္မတ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး...
ဧရာဝတီမြစ်ရေနှင့် ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ် ကျော...
တစ်ပြည်လုံး အပစ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးဖို့ ယခုလကုန်...
သွေးအားကောင်းစေရန် အစားလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာ စားပေးပါ...
ရဲများ အမှုစစ်ဆေးပုံများကို အများပြည်သူ မြင်သာနိုင...
ခေါင်းကိုက်ခြင်း အတွက် သဘာဝ ကုထုံး နဲ့ ကုမယ်
အင်းစိန် အကျဉ်းဦးစီး အမျိုးသမီးဆောင် ညအချိန်မတော် ...
မန္တလေးမှာ ကလေးတွေ စာမေးပွဲဖြေဖို့ ကြုံနေရတဲ့ ဒုက္ခ
ကေအိုင်အေ (ကချင်) လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က တိုက်ပွဲအတွင်း...
ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှု နောက်ကွယ်မှ အဖြစ်ပျက်အစုံကိ...
ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သမ္မတဦးသိန်းစိန် နှင...
၅၂ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု မယ...
မုံရွာ ရဲစခန်းအတွင်း အရပ်သားတဦး သေဆုံးမှုနဲ့ ရဲများ...
အဲပုဂံရဲ့ ရန်ကုန်-ချင်းမိုင်ခရီးစဉ် ခေတ္တရပ်နားမယ်
ဘောလုံး လောကရဲ့ လုပ်ခ အမြင့်ဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာတဲ...
တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးတွင် တရုတ်နှင့် ဘင်္ဂါလီ မပါဝ...
ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် နားမော်ကျေးရွာတွင် မိုးကြိုးပစ်မှု...
နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီများ ထိပ်တန်းအခွန်စာရင်း၌ ပါဝင်လြာ...
အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်မှု အကျဉ်းသားတွေ မကျေနပ်လို့ဆန္ဒ...
IPPLE DISCHARGE နို့ကနေ နို့မဟုတ်တာ ထွက်ရင်
အမြန်လမ်း လမ်းဘေး ဓါတ်တိုင်ဝင်တိုက် ခင်ပွန်းသေဆုံး...
လူကုန်ကူးမှု ပုံစံများ ပြောင်းလဲ ကျူးလွန်လာ၊ ကျူးလွ...
ရန်ကုန်တွင် စင်ကာပူကုမ္ပဏီ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ် ရောင်းခ...
Hair Loss in Women Treatments အမျိုးသမီး ဆံပင်ကျွတ...
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရန် နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်...